03/25/13 ~ Myanmar Forward
ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် သွေးထိုး လှုံ့ဆော် နေသူများကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ပြောကြား
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက မင်္ဂလာဈေးနှင့် ယုဇနပလာဇာအနီးရှိ ဆိုင်များ အချိန်စော ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည် ကို တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် လှုံဆော်သွေးထိုး နေသူများကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် လူမှု အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ရန်ကုန် နယ်နမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူ ပြည်သူများမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဒုတိယရဲမှူးကြီး သက်လွင်က Eleven Media Group သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဒီလို သွေးထိုး လှုံ့ဆော် သူတွေကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီး သွားနိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေ နဲ့ လည်း နေရာအနှံ့ ချထားပြီး လုံခြုံရေးယူပြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး အဓိကပါဝင်ဖို့ လိုအပ် တာ ပြည် သူတွေ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ပူပေါင်းပါဝင်တာ အားနည်းနေ ပါ တယ်။ ပြည် သူတွေ ရဲ့ ကြောက်ရွံ့ မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် နည်းမှန် လမ်းမှန်တွေ ချပြဖို့ အတွက်ပါ။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင် လည်း ဒီလို လှုံ့ဆော်မှုတွေကို အကောင်းဆုံး စဉ်စား နေထိုင်ပြီး လှုံဆော် သူတွေ တွေ့ ရင်လည်း အမြန် ဆုံး ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်ကို အပြည့်ဝဆုံး လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်ုတိုင်း ဒေသကြီး ဒုတိယ တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးသက်လွင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် Facebook နှင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်အချို့တွင် ဖော်ပြနေသည့် အကြောင်းအရာများကလည်း လှုံ့ဆော်မှု များကို ပိုမို ဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှင့် နားလည်မှု မရှိသူများကို ဖျက်ဆီးမှုများ လုပ်နေ သည်ဟု ယူဆ ကြောင်း ဦးသက်လွင်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့ညက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်အတွင်း လူအုပ်စု တစ်စုမှ သွေးထိုး လှုံ့ဆော် မှု တစ်ခု ပြုလုပ် ခဲ့ပြီးနောက် နေထိုင်သူ ပြည်သူများမှာ အလန့်တကြား ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူအုပ်စု အများအပြား ထွက်ပေါ် လာ ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် လုံခြုံရေး အများအပြား ချထား ခဲ့ပြီး ထိုသို့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူများကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသ ကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်နေသည့် ပဋိပက္ခ သတင်းများမှာ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ကို လိုလားသူမရှိသည့်အတွက် ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးသက် လွင်၏ သုံးသပ် ပြောကြား ချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ လှိုင်သာယာ၊ အင်းစိန်၊ လှိုင်၊ မြောက် ဒဂုံ၊ တောင် ဥက္ကလာ ပနှင့် သန်လျင်မြို့နယ်များတွင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း အသွင်ဆောင်သည့် လှုံ့ဆော် မှု အခြေ အနေ များ ရှိနေကြောင်း ၄င်းမြို့နယ် နေသူတို့၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
ထိုသို့ အခြေ အနေများ ရှိနေသည့် နေရာများကို လုံခြုံရေးအင်အား နှစ်ဆနီးပါးခန့် တိုးမြင့်ချထားကြောင်း ဦးသက် လွင်က ပြောသည်။
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း အသွင်ဆောင်သည့် ပဋိပက္ခအချို့မှာ လွန်ခဲ့သော သတင်းပတ် ၆ ပတ်ခန့်က သာကေ တ မြို့နယ်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်များအားလည်း စုံစမ်းလျှက် ရှိကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
သာမန် ရွှေ အရောင်း အ၀ယ် တစ်ခုမှနေပြီး ဘာသာရေး ပဋိပကများနှင့် အကြမ်းဖက် လုယက် မှုများ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့၊ ရမည်းသင်းမြို့နှင့် လယ်ဝေးမြို့ ဖြစ်စဉ်များတွင် ၃၂ ဦး သေဆုံးပြီး ၃၉ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကာ လှုံ့ဆော်သူဟု ယူဆရသူ ၃၅ ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင် ရွက်နိုင် ရန် စီစဉ် လျှက် ရှိသည်။
ယခင်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအား တရားစွဲမည့်ကိစ္စသင်္ကြန်ပြီး စတင်မည်ဟုဆို
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |5comments
မကြာ သေးမီက ယခင်နိုင်ငံတော် အကြီး အကဲများ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ငြိမ်း)၊ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ခင်ညွှန့် (ငြိမ်း)၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် တို့အပါ အ၀င် ယခင် စစ် ဘက် ခေါင်းဆောင် အချို့ အား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ညဉ်း ပန်း ခံရမှု အတွက် တာဝန် ရှိသည်ဟု ဆိုကာ တရား စွဲ ဆိုမှု ပြုသွား မည့် ကိစ္စအား လာမည့် နစ်သစ်ကူး သင်္ကြန် အပြီးတွင် ပြန်လည် စတင် မည် ဖြစ်ကြောင်း တရား စွဲဆို မှုအား ဦးဆောင်သူ ဦးအောင် ထွန်း (နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း)မှ Hot News သို့ ပြောသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခြင်း အထိမ်း အမှတ် အခမ်း အနားမှာ အဲဒီ စစ်ခေါင်းဆောင် တွေလာ တောင်းပန် လို့ရတယ်။ ဆိုပြီး ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မီဒီယာ တွေကနေ တဆင့် ပြောခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ကဘယ်သူမှ လာပြီး တစ်စုံ တစ်ရာက ပြောခဲ့ တာမျိုး ကိုယ်စား လှယ်နဲ့ လာပြော ခိုင်းတာမျိုး လုံးဝ မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ခု ဒီကိစ္စ နိုင်ငံရေး သမား တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သား ဟောင်းတွေ နဲ့ တိုင်ပင် ထားပြီး ပါပြီ။ ခု ကိစ္စ လေး တွေ ရှိနေ သေးတဲ့အတွက် သင်္ကြန် ပြီးရင် ဒီတ ရား စွဲမယ့် ကိစ္စကို သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲကြီး လုပ်ပြီး တရား စွဲမယ့် ကိစ္စ ဆက်လက် လုပ် ဆောင် သွား မှာ ပါ”ဟု တရား စွဲဆိုမှု အား ဦးဆောင် မည့် ကိုအောင်ထွန်း က Hot News သို့ ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ တရား စွဲဆိုမှု ပြုလုပ် သူ ကိုအောင်ထွန်း မှလည်း ယင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူ ယခင် စစ်ဘက် အကြီး အကဲ များနှင့် တရား စွဲဆို မှုတွင် ပါဝင်သည့် ဌာန ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်း ၅၀ ကျော်အား အကြောင်းကြား စာများ အသီးသီး ပေးပို့ ခဲ့ပြီး ယင်းအား ထောင်တွင်း နှိပ် စက် ခဲ့ပြီ။ တရားစွဲ ဆိုမှုတွင် ပါဝင်သည့် စစ်ဘက် ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင် များ အားလည်း ရဲဘော် ဖုန်းမော် ကျဆုံးခြင်း အောက်မေ့ ဖွယ် အခမ်း အနား၌ လာရောက် တောင်းပန်ခြင်း ပြုရန် တောင်းဆို ထားသော်လည်း အဆို ပါ ခေါင်း ဆောင် များ ဘက်မှ လာရောက် တောင်းပန် ခြင်း မပြု ခဲ့ကြောင်း ၎င်း က ပြောသည်။
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
မတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၃
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း တရန်း(Trang)မြို့နယ်ရှိ ကန်တန် (Kantang) လှေ ဆိပ်တွင် ရေ လုပ်သား အဖြစ် ရောင်း စားခံ ထားရသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသား ၂၉ ဦးကို ထိုင်း အာဏာပိုင်းများက မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်း က သွားရောက် ကယ်ခဲ့သည်။
ရောင်းစား ခံ ထား ရသူများ တိုင်ကြား ချက်အရ မတ် ၁၀ ရက်၊ ၂၂ ၊ ၂၃ ရက်နေ့ များ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အထူး စုံစမ်း စစ်ဆေး ရေးဌာန (DSI)၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အဖွဲ့ Myanmar Association Thailand (MAT)၊ မြန်မာ အစိုးရ အလုပ် သမားဝန် ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်ထွန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း အခြေစိုက် ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက် ရေး ဖောင်ဒေး ရှင်း (FED)တို့ ပူးပေါင်း၍ သွားရောက် ကယ်တင် ခဲ့ကြောင်း MAT အဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သောင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၁၅ဦး၊ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ၁၁ ဦးနှင့် ၂၃ ရက်နေ့ တွင် ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၂၉ ဦးတို့ကို ကယ်တင် ခဲ့ပြီး ယင်း မြန်မာ နိုင်ငံသား ၂၉ ဦးနှင့် ဆက်စပ်၍ လူကုန်ကူးမှုနှင့် ပတ်သက် သူ မြန်မာနိုင် ငံသား ၁ဦးကိုလည်း ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထားပြီး ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသူ များ ကို လတ် တလော ကန်တန် ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ထား ကာ မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း အာဏာပိုင်များ အနေနှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသူ တချို့တို့ကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် သို့ ပြန်ပို့ မည့် နေ ရက်ကို မသိရှိရ သေးသော်လည်း မကြာမီ ပြန်ပို့မည်ဟု ယူဆရကြောင်း ဦးကျော်သောင်းက ဆက်ပြော သည်။
ယင်း မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့မှာ ထိုင်းနိုင် ငံရှိ ကြက်သား အလုပ် ရုံ တခုတွင် အလုပ် ရမည် ဆိုသောကြောင့် မကွေး တိုင်း မင်း ဘူးမြို့ နယ်မှ ပွဲစား များနှင့် ဆက်သွယ် ရောက်ရှိ လာကြပြီး ယင်း သို့ ရောင်း စားခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကြက်သား အလုပ်ရုံမှာ တစ်လ ဘတ်ငွေ ၁၀၀၀၀ ရမယ် ဆိုပြီးတော့ ခေါ် လာ တာ နောက် ဆုံးတော့ လှေ ဆိပ်မှာ သွား ရောင်းစားခံရ တာ”ဟု ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသူ များ ၏ ပြောကြား ချက်ကို ကိုး ကား၍ ဦးကျော်သောင်းက ဆိုသည်။
ရောင်းစားခံ ရသူများ ထဲတွင် အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် ၁၈ နှစ် အရွယ် ၃ ဦး အပါ အ၀င် အသက် ၂၀ ကျော် အရွယ် များ ဖြစ်ပြီး မကွေး တိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည် နယ်များမှ လာရောက် ကြ သူ များ လည်း ပါ ၀င်ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့ သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ချွန် ဘူရီမြို့ နယ်ရှိ အချောင် လှေ ဆိပ်တွင် ရေလုပ်သား အဖြစ် ရောင်းစား ခံထားရသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသား ၂၂ ဦးကိုလည်း ထိုင်းလူ ကုန် ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ Anti-Human Traffic king Division (AHTD)နှင့် ထိုင်းနိုင် ငံရောက် မြန်မာနိုင် ငံသားများ အဖွဲ့ Myanmar Association Thailand (MAT)တို့ ပူးပေါင်း၍ သွားရောက် ကယ်တင် ခဲ့သေးသည်။
၂၀၁၂ ခု နှစ် ဆန်း ပိုင်းမှ စတင်၍ ယခုလ အတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူ လူ ၂၉၂ ဦးကို ကယ်တင်နိုင် ခဲ့ပြီး လူကုန် ကူး မှုနှင့် ပတ်သက်သူ ဟု ယူဆရသူ ၈ ဦးတို့ကိုလည်း ဖမ်း ဆီးနိုင် ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဆန်း ပိုင်းမှ စတင်၍ ယခုလအထိ လူ ၅၀ ခန့်ကို ကယ်တင် ထားကြောင်း MAT အဖွဲ့ က ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်း မြန် မာပြည် သား အချင်းချင်း ထိုင်း အလုပ်ရှင်များထံသို့ ရောင်းစားမှုများလည်း ရှိကြောင်း သ တင်းများ အရ သိရ သည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်သားအများစုက ပွဲစားများ အပါအ၀င် နည်း လမ်း အမျိုး မျိုးဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းသို့ အဖမ်း အဆီး အစစ် အဆေး များကြားမှ နေ့စဉ်ကဲ့သို့ လာရောက် အလုပ် အကိုင် ရှာဖွေနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မတ်လမှ စတင်၍ လူကုန်ကူးမှု ပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး ရုံးများကိုလည်း ထိုင်း-မြန်မာနယ် စပ် ကော့သောင်းမြို့နှင့် တာချီလိတ် မြို့တို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တတိယမြောက်ရုံးကို ကရင်ပြည် နယ် မြ၀တီ မြို့၌ ယခုနှစ် မကုန်ခင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၄ လုပ်ငန်းစီမံချက် သဘောတူညီချက်အရ ထိုရုံးများ ဖွင့် လှစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လာရောက် အလုပ် လုပ်နေသော ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ် သမား ၂ သန်းခွဲမှ ၄ သန်း ၀န်းကျင်ရှိနိုင်ကြောင်း အလုပ် သမား အဖွဲ့အစ ည်း များက ခန့်မှန်း ထားသည်။
တပ်မတော်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ၁ မိုင်လမ်း ဖွင့်ပွဲ
၆၈ နှစ်မြောက် တပ် မတော်နေ့ ကို ကြို ဆို ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် လားရှိုး မြို့နယ် နားမွန်း aကျးရွာ အ၀င် လမ်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
အရှည် အားဖြင့် ၁ မိုင် ၊ ပေ အားဖြင့် ၅၂၈၀ ပေ ရှည် လျားတဲ့ ကျောက်ချော လမ်းကို မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး အဖွဲ့က ငွေ ၂၁၂ သိန်း အကုန် အကျ ခံပြီး တည်ဆောက် ခဲ့တာ လို့ ဆို ပါတယ်။
လားရှိုး လမ်းမကြီး ကနေ နားမွန်းကျေးရွာထဲကို သွားမယ့် အ၀င်လမ်းကို ယခင် မြေသားလမ်းကနေ ယခု ကျောက်ချော လမ်းအဖြင့် ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်လို့ လားရှိုးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့က အရာရှိ တဦးဖြစ် တဲ့ ဦးသက်ပိုင်က ဧရာဝတီ ကို ပြောပြပါတယ်။
လမ်းဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနား ကို လားရှိုးမြို့နယ် ခရိုင်အုပ် ချုပ်ရေး မှူး နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တွဲဖက် ပြည်နယ် ခရိုင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာန ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ NGO အဖွဲ့အစည်းများ မြို့မိမြို့ဖ များနဲ့ ရပ် ကွက်နေ ပြည် သူများ တက်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- အဲမလီ (ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ဆိုင် အားလုံးကို ည ကိုးနာရီ နောက်ဆုံးထား ပိတ်ရ မယ်လို့ အမိန့်ထုတ်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အတွက် စားသောက်ဆိုင်၊ မီနီမား ကတ် စတဲ့ ဈေးဆိုင် တွေကို ဒီကနေ့ ညက စပြီး ည ၉ နာရီ နောက်ဆုံးထား ပိတ်ရ မယ်လို့ ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။ ဒီ အမိန့် ထုတ်ပြန် ရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက RFA ကိုအခု လိုပြော ပါ တယ်။
" စားသောက် ဆိုင်တွေကို ည ကိုးနာရီ ထိပဲ ဖွင့်ဖို့ အမိန့် ထုတ်တာ ပါခင်ဗျာ၊ ကိုးနာရီ ကျော်တဲ့ အခါ ကျရင် သောက်စား မူးယစ်ပြီးတော့ တခြား ပြဿနာတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ည ကိုးနာရီ ထိသာ ဖွင့်ပါလို့ ကျွန်တော် တို့ အကြောင်းကြား ထားတာ ပါခင်ဗျ"
မနေ့ ညကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းက အစ္စလာမ် ဘာသာ ဝင်တွေ အများဆုံး နေထိုင်တဲ့ မင်္ဂ လာ တောင်ညွှန့် မြို့နယ်မှာ လူစု လူဝေးနဲ့ ဆူပူဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။
ကာလာဘတ်(စ)တီးစွန္နီ ဂျာမေဗလီ ရှေ့တွင် ခရီးသွားပြည်သူများထိတ်လန့် အကျိုးဆက် ရန်ကုန် ပုဒ်မ (၁၈၈) ထုတ်မည်ဟုသိရ
ရန်ကုန် တိုင်းဒေ သကြီး မင်္ဂလာ တောင် ညွန့် မြို့ နယ် ၁၄၄ လမ်းနှင့် ဒေါ်သိန်း တင် လမ်း ထောင့်ရှိ ကာလာ ဘတ် (စ) တီးစွန္တွီ ဂျာမေ ဗလီ ရှေ့တွင် ၂၅-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်းတွင် စာဖြန့်ဝေ ခဲ့ခြင်း ကြောင့် အစ္စ လာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ် သူ ပြည် သူများ ထိတ် လန့်ကာ ဆိုင်များ ပိတ်ခြင်း အခြေ အနေ အား…စောင့် ကြည့်ခြင်းများ အဖြစ် သို့ ရောက် ရှိခဲ့ ကြောင်း သိရှိ ရသည်။ စာဖြန့်ဝေခြင်းကြောင့် အစ္စ လာမ် ဘာ သာ ၀င် အပါအ ၀င် လမ်း ခရီး သွားပြည် သူများ ဂရု တ စိုက် စိုး ရိမ် ထိတ် လန့် စွာဖြင့် သွား လာခြင်း အား ဗလီများ ဖျက်တော့မ ည်ဟု ကော လဟာလ စကား များ ဖြစ် သည် ဟုသိရ သည့် အတွက် အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် ဆိုင်ရှင် တစ်ဦး အားမေးမြန်း ကြည့်ရာ “ကျွန်တော် တို့ ကိုမ နက်က စာဖြန့် သွားတယ် မကြာ ခင်မှာ ဒီဗ လီကို ဖျက် မယ်ဟု စာထဲ မှာပါ လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်တွေ ကိုပါ ရော အဖျက်ခံ ရ မှာကြောက် တဲ့အ တွက်ကြောင့် ကျွန်တော် တို့လည်း မဖွင့်ရဲပဲ အခြေ အနေ ကိုစောင့် ကြည့်နေ ရကြောင်း” ဆိုပါသည်။ အဆို ပါ သတင်း သည် မီဒီယာ များကြား တွင် လည်းပဲ ပျံ့နှံ့ ခဲ့ပြီး သွားရောက် သတင်း ယူ ရာ တွင်
စာဖြန့် ဝေခြင်းကြောင့် ဟု သာကော လဟာ လ ကိုသာ သိ ရ သည်။ သို့သော် စာဖြန့်ဝေ ထား သည့် စာကို မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက် မှပြ သခြင်းမ ရှိကြောင်း.. အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် များနှင့် ခရီး သွားပြည် သူများ မှာ အထိတ် တလန့် ဖြစ်နေ ရခြင်းကို သာတွေ့ ရှိခဲ့ရ ပါကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ ဒါ့ အပြင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေ သကြီးအ စိုးရ အဖွဲ့ နှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦး၏ ပြောကြား ချက်အရ ရန်ကုန်တိုင်း စည်ပင် သာယာ နယ်န မိတ် အတွင်း ပုဒ်မ (၁၈၈) ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း ၊ အကြမ်းဖျင်း သဘောအရ လူစု လူဝေး ခွင့် ရှိသော လည်း ပြဿ နာဖြစ်ပွား လာပါက ပဋိပ က္ခဖြစ်စေ ရန် (သို့မဟုတ်) တည်ငြိမ်မှု အား ပျက်ပြားစေ ရန် ၊ ဆူပူမူ အား လှုံ့ေ ဆာ် မူ အဖြစ် ပုဒ် မတပ်၍ အရေး ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း တည်ငြိမ် မှု ပျက်ပြားစေ မည့် မည် သည့် လုပ်ရပ် ကိုမှ ရန်ကုန် တိုင်းနယ်မြေ အတွင်း မဖြစ်ပေါ်နိုင် ရန် ယခု ကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထပ် မံရ ရှိသော သတင်း များ အရ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အ တွင်း မြို့နယ် အချို့တွင် ည (၉)နာရီ ဆိုင်ခန်းများ ပိတ်သိမ်းရမည်ဆိုသည့် အမိန့်အား ထုတ်ပြန်ကြေ ညာ ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
ပဲခူးတိုင်း အိုးသည်ကုန်းမြို့မှာ ဆူပူ တိုက်ခိုက် မှုဖြစ်
ပဲခူးတိုင်း အိုးသည်ကုန်း မြို့မှာ ပလီ တလုံးနဲ့ အိမ် တချို့ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညက တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ ရတယ်လို့ ဒေသခံ တဦးက ဘီဘီစီကို အတည်ပြု ပြောကြား ပါတယ်။ လူပေါင်း ၃၀၀ လောက် ပါ တဲ့ အုပ်စု ဟာ အိုးသည်ကုန်းက ပလီ တလုံး ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်နဲ့ ဈေးဆိုင် ၂၀ ကျော်ကိုလည်း ဖျက်ဆီး သွားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
အခုတော့ လုံခြုံ ရေး တွေ ရောက် ရှိ လာ တဲ့ အတွက် အခြေ အနေ တွေ ပြန်ငြိမ် သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိတ္ထီ လာမြို့မှာ တော့ အရေး ပေါ် အခြေ အ နေ ကြေညာပြီး စစ်တပ် ကို ချထား လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခြေ အနေတွေ တည်ငြိမ် လာ နေပြီ ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ဒုက္ခ သည် စခန်းတွေမှာ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ဖြစ်နေ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
KIA သစ်ကား (၂) စီး မန်စီမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
မန်စီမြို့နယ် ၊ ကျောက် ဖျာ ရွာနှင့် မန် ၀ိန်းကြီး ရွာကြား တွင် မတ် ၂၂ ရက် နေ့က သစ် များတင် ဆောင် လာ သည့် သစ်ကား (၂) စီးအား အစိုးရ တပ် တစ်ခုမှ ဖမ်းဆီး ရ မိ ခဲ့ သည် ဟု သိ ရှိရ ပါသည်။
ကျောက် ဖျာ ရွာမှ မန် ၀ိန်းကြီး ရွာ ဘက် သို့ သစ်ကား များ မောင်း လာသော အ သံကြား သဖြင့် ကင်းစောင့် နေေ သာ ရဲဘော် မှ ဓါတ်မီးဖြင့် ထိုး၍ ရပ်ခိုင်းရာ ကားသ မား များက ကားပေါ်မှ ခုန်ချ ထွက်ပြေး သွားခဲ့ ကြောင်း သိရ သည်။
၎င်းနေ ရာသို့ မတ် ၂၂ ရက်နေ့ မနက်က သွားရောက် ရှင်းရာ သစ် တင် ထားသော တုန်ဖုန်း ယာဉ် ၁ စီးနှင့် အေရိုး လက် ယာဉ် ၁ စီးအား အစိုးရ တပ်မှ တွေ့ရှိ သိမ်း ဆည်း ရမိ ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
ကျောက်ဖျာ ရွာ သား တစ်ဦး ပြောပြ ချက် အရ သိမ်း ဆည်း ရမိ သစ်ကား ၂ စီးမှာ KIO ကိုက် ထိပ်ဆက် ဆံ ရေး မှူး ဒု အရာ ခံဗိုလ် အားရွှန်၏ ကား များဖြစ်ပြီး KIO အဖွဲ့ အတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာ သည်ဟု အကြောင်းပြ ကာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ် စားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယခင်က အစိုးရ တပ်များ မရှိ သဖြင့် သစ်များ ခိုး ထုတ်ေ ရာင်း စား နေကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ကိုရီးယားသွားခွင့် စာမေးပွဲ ကွန်ပြူတာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရတော့မည်
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under သတင်းများ | No comments
ကိုရီး ယားနိုင် ငံသို့ သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင် ခွင့် ရရန် ကွန်ပြူ တာ အခြေပြု စစ်ဆေး သည့် ပုံစံဖြင့် ပြောင်း လဲ စစ်ဆေး တော့မည်ဟု သိရ သည်။
သမာ ရိုးကျ အဖြေလွှာ စာရွက်ဖြင့် ဖြေဆိုသည့် စနစ်မှ ပြောင်း လဲ စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ပြူ တာ အခြေပြု စာစစ် ဌာနကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ တွင် အလုပ်သမား အလုပ်ကိုင်နှင့် လူမှုဖူ လုံရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ ၀န်ကြီး ဦးမောင်မြင့်၊ ၀န်ကြီး ဌာန ကိုရီးယား လူ့ စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အ စည်း(HRD Service of Korea)မှ ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Lee Choon Book နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ၀န်ထမ်း များ တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဘာသာစကား အားနည်း မှုများ မရှိစေ ရန် အရည် ချင်း စစ် စာမေးပွဲများကို သေချာစွာ စိစစ်ကြပ်မတ်၍ အလုပ်သမားစေလွှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အလုပ် သမား ခေါ် ယူမှု ကိုလည်း လျှင်မြန်စွာ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင် ငံမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၈ မှ တရားဝင်လုပ်သားများကို စာမေးပွဲဖြေ ဆိ်ု ရွေးချယ် ၍ စေလွှတ် ခဲ့ရာ ယခုနှစ် အထိ လုပ်သား ၇၀၀၀ ကျော် စေလွှတ်ပြီးကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန် ဆယ်ကျော် သက် တစ်ဦး မိခင်ဖြစ်သူအား သတ်ဖြတ်
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အသက် (၁၉)နှစ်ရှိ သံသယ တရားခံက မိမိသည် မိခင်ဖြစ် သူကို သဘော မကျကြောင်းနှင့် လူ့ ခန္ဓာ ကိုယ်အား ခွဲ စိတ်မှု အကြောင်း ပိုမို သိရှိ လို၍ ယခုလို လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဟု ရဲများ ထံ ထွက် ဆို ခဲ့ကြောင်း သတင်း များက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ တွင် ဆယ်ကျော် သက် လူငယ် တစ် ဦးသည် မယ်မယ် ရရ အကြောင်း မရှိဘဲ မိခင်ကို သတ်ဖြတ်ကာ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း များအား ဖြတ်တောက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။ အသက် (၁၉)နှစ်ရှိ သံသယ တရား ခံက မိမိ သည် မိ ခင်ဖြစ် သူကို သဘော မကျ ကြောင်းနှင့် လူ့ခန္ဓာ ကိုယ်အား ခွဲစိတ်မှုအကြောင်း ပိုမို သိရှိ လို၍ ယခု လို လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဟု ရဲများထံ ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမည်ဖော် မပြသော အဆိုပါ လူငယ် သည် မိခင် ရင်းကို သတ်ဖြတ် ကာ ရေချိုး ခန်း ထဲတွင် အနည်း ဆုံး (၁၅)ပိုင်းမျှ ပိုင်းဖြတ် ခဲ့သည်။ အလောင်းကို အစိတ်စိတ် အမြွှာမြွှာ ခုတ်ပိုင်းရာတွင် မီးဖိုချောင်သုံး ဓားများကို အသုံးပြု ခဲ့ကြောင်း အမည်ပြောကြားရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက AFPသို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားသည်။
စနေနေ့က ယင်းသတင်းကို ဆန်ကီဒေးလီး သတင်းစာက စတင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းလူငယ်သည် တိုကျိုမြို့ အနီးရှိ တိုက်ခန်းငယ် တစ်ခုတွင် မိခင်နှင့်အတူ နေထိုင်သည်။ ၎င်းသည် မိခင်ကို သတ်ဖြတ်ပြီး
နောက် အလောင်း ကို ရေချိုး ခန်းထဲ ဆွဲယူ လာကာ ရေချိုး ကန်ထဲတွင် အပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ခဲ့သည်။ ထို့နောက် တွင် မူ အဆိုပါ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပိုင်း အစများ ပြည့်နေသည့် ရေချိုး ကန်ကို ရေအပြည့် ဖြည့်ခဲ့ပြီးမှ အပိုင်း အစ များကို ပလတ်စတစ် အိတ်များထဲတွင် ထည့်ကာ တစ်ထုပ်ချင်းစီ စွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်း ရဲများ က ပြောဆို သွားသည်။
၎င်းက "ကျွန်တော် သူ့ကို မကြိုက်ဘူး"၊ "သူက ရိုးရိုးသာမန် လူတစ်ယောက်ပါပဲ"စသည့် မှတ်ချက်များသာ မိခင်နှင့် ပတ်သက်၍ ရဲများထံ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းက မိမိသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက် ရသည် ကို စိတ်ဝင် စား မိကြောင်း လည်း ရဲများထံ ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း ယူမီရီနှင့် မိန်နီချီ သတင်း စာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျပန်ဥပဒေအရ ယခုအသက်အရွယ်သည် အသက်မပြည့်သေးဟု သတ် မှတ်ခြင်းကြောင့် ၎င်း ၏ အမည်ကို သတင်း မီဒီ ယာများက ဖော်ပြ ခွင့် မရှိချေ။
၎င်းကို မတ်လ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ရဲများက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အမျိုးတစ်ဦးက နေအိမ်သို့ လာရောက် လည်ပတ် စဉ် ခန္ဓာကိုယ် ကြွင်းကျန် အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့၍ ရဲအား တိုင်ကြားခဲ့ရာမှ ယခုလို အဖမ်းခံ ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရဲများက ယင်းအချိန်တွင် လူသတ်မှု ကျူးလွန်ပြီးသည်မှာ (၂)ပတ်မျှ ရှိပြီဟု ယူဆထား သည်။
News From: Planet Myanmar Network
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာမှ ရဲသား သုံးဦးကို လွှတ်ပေးရန် မြန်မာကို တောင်းဆို
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ မြန်မာက ဖမ်းဆီး ထားသော ရဲသား ၃ ဦးနှင့် အရပ်သား တစ်ဦး တို့ကို အမြန် ဆုံး ပြန် လွှတ်ပေးရန် တောင်း ဆို လိုက် သည်ဟု သ တင်း ရရှိသည်။
BGB ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဆိုင်ရာ မြန်မာ သံ အ မတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့် သန်းမှ တဆင့် ထိုသို့ တောင်းဆို ခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလီ သတင်း စာများက ဆိုသည်။
သူတို့ ဖမ်းဆီး ခံရ သည်မှာ ၁၁ ရက် ရှိလာပြီး နောက် ပိုင်းတွင် သူတို့ လွှတ်မြောက်ရေး အတွက် ဘင်္ဂ လာဒေခ်ျ့ နိုင် ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးကို မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆို ထားခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ နယ်စပ် နစက တပ်ဖွဲ့မှ မိမိတို့ အနေဖြင့် ဖမ်းဆီး ထားသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား (၄) ဦးကို လွှတ်ပေး ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အထက် အမိန့်ကို စောင့် ဆိုင်းနေ ရ၍ ကြန့်ကြာနေ
ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ BGB ကို အကြောင်းပြန်ကြားပြီးနောက် မြန်မာ သံအ မတ်ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တောင်းဆိုချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဲသား ၃ ဦး အပါအ၀င် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား တစ်ဦးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအထဲထိ လျို့ဝှက် ၀င်ရောက်ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက် ရာမှ မြန်မာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ နစကမှ ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
လူငယ်တစ်ဦးကို မိမိကိုယ်မိမိသေကြောင်းကြံစည်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကအရေး ယူလိုက် ရမှု တောင်တွင်း ကြီးမြို့ ၌ဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under မှုခင်း | No comments
မကွေး တိုင်းဒေ သကြီး၊ တောင် တွင်းကြီး မြို့နယ်၊ တောင်ပြင် (၂) ရပ် ကွက်တွင် လူငယ် အမျိုး သား တစ် ဦး မိမိကိုယ် မိမိ အဆိပ်သောက် သေကြောင်း ကြံစည် မှုဖြစ်ပွား ကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
ဖြစ်စဉ် မှာ (၁၉.၃.၂၀၁၃)ရက်နံနက် (၄)နာရီ အချိန် က တောင်ပြင် (၂) ရပ်ကွက်နေ ကိုဖိုးကစ်(ခ)ရဲထွန်းနီ (၂၅)နှစ် (ဘ) ဦးခင်မောင်ထွေး သည် အဆိပ် သောက် ပြီး ဆေး ရုံ သို့ ရောက် ရှိနေကြောင်း တာဝန် ကျ ဆေး ရုံ ၀န် ထမ်းက ရဲ စခ န်း သို့ အကြောင်း ကြားသည် ဆို ၏။တောင် တွင်းကြီး ပြည် သူ့ ဆေး ရုံ သို့တောင် တွင်းကြီး မြို့မ ရဲ စခန်း တာ ၀န်မှူး ဒုရဲ အုပ်ကျော်ကျော် လှိုင်၊ ဒုရဲအုပ် မျိုးမင်းသိမ်းတို့သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ကိုဖိုးကစ်(ခ)ရဲထွန်းနီဆိုသူမှာ ကျန်း မာရေး အခြေ မစိုးရိမ် ရသဖြင့် တာဝန်မှူး ဒုရဲ အုပ်ကျော်ကျော်လှိုင်က မိမိကိုယ် မိမိ သေကြောင်း ကြံစည် သူ ဖိုးကစ် (ခ) ရဲထွန်းနီကို ဥပဒေအရအရေး ယူပေး ပါရန် တရား လိုပြု လုပ်တိုင် တန်း ခဲ့ရာ မြို့မ ရဲစခန်း မှ (ပ) ၅၇/၂၀၁၃ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၉အရ အမှု ဖွင့် အရေး ယူ ထားပြီး ဆက်လက် စုံစမ်း စစ်ဆေး နေကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။
ဖအေကသမီးကိုမုဒိန်းပြုကြံစည်သည်ဆိုကာမိခင်ဖြစ်သူကတိုင်တန်းမှု တောင် တွင်းကြီး ၌ဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
မကွေး တိုင်း ဒေသကြီး၊ တောင်တွင်း ကြီးမြို့နယ်၊ ခင်တဲ ကျေးရွာ တွင် ဖခင် ဖြစ် သူက အရွယ် မ ရောက် သေး သည့် သမီး အရင်း ဖြစ်သူ အား မုဒိန်း မှုပြု ကျင့် ရန် ကြံစည် သည် ဆိုကာ မိခင် ဖြစ်သူ က အမှု ဖွင့် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။ (၁၅.၃.၂၀၁၃)ရက် ည(၉) နာရီ အချိန် က ခင်တဲကျေး ရွာ နေ ဒေါ်—–(၃၅)နှစ် သည် နေအိမ် တွင် သမီး——(၂)နှစ် အား အိမ်အ လယ်ခ န်းခြင် ထောင် အတွင်း ၌ နို့တိုက်ေ နစဉ် ခင်ပွန်း ဖြစ် သူကို—— သမီး ဖြစ်သူ မ——–(၁၂)နှစ်၊ သား——-(၇) နှစ် ၊ မောင်——–(၁၀)နှစ် တို့ သည် အိမ်ရှေ့ ခန်းတွင် တုံးလုံးလှဲ လျက် တီဗွီ ကြည့် နေပြီး ထိုနေ့ည (၉း၃၀) အချိန် ခန့်တွင် ဒေါ်—- သည် ကလေးနို့ တိုက်ပြီး
ခြင် ထောင် အပြင် ဘက် သို့ကြည့် စဉ် ခင်ပွန်းဖြစ် သူ ကို—–နှင့် သမီး ဖြစ်သူ——တို့ အား စောင်ခြုံ လျက်တွေ့ရ ၍ မ သင်္ကာ သဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ် သူ ကို——-အား စောင်လှပ် ခိုင်းရာ ခင်ပွန်းဖြစ် သူ သည် သမီး——-၏ မိန်း မကိုယ် အင်္ဂါစပ် အားလက်နှင့် ကိုင်နေ သည် ကို တွေ့ရပြီး သမီးဖြစ်သူ ၀တ် ထားသော ဘောင်းဘီအနီ ချွတ် ထားသည် ကိုတွေ့ ရ၍ သမီး ဖြစ်သူ အားမေး ရာ ခင်ပွန်းဖြစ် သူမှ သမီး မ——- ခြုံထားသော စောင် အတွင်း သို့ ၀င်လာပြီး ဘောင်းဘီ အား ဆွဲချွတ် သဖြင့် ပေါင် အား ချိတ်လိမ် ထားရာ၊ ဖခင်ဖြစ် သူမှ ဘောင်း ဘီအား ခြေမနှင့် ညှပ်၍ ချွတ် သဖြင့်ကျွတ် သွားကြောင်း၊
သမီးဖြစ် သူမှ မိခင်ဖြစ်သူ အား တိုင် မယ် ဟုပြော ရာ တိုင်လျှင် ရိုက်မည်၊ လင် မယားခြင်း ကွဲမည် ဟုပြော ကြောင်း သမီး ကပြော၍ သား အဖ အရင်းဖြစ် ပွားသည့် ကိစ္စ ဖြစ်နေ သောကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်——မှ မွေးချင်း များအား သွား ရောက် တိုင် ပင်ပြီး (၁၉.၃. ၂၀၁၃)ရက် ညနေ(၅) နာရီ အချိန် ခန့် ကျမှ တောင်တွင်း ကြီး ရဲစခန်း သို့ ခင်ပွန်းဖြစ် သူ ကို——အား ဥပဒေနှင့် အညီ အရေး ယူပေး ပါရန် တရား လိုပြု လုပ် တိုင် တန်း ခဲ့ သည် ဆို၏။
ယင်းဖြစ် စဉ်နှင့် ပတ် သက်၍ ကို——(၃၈)နှစ် ဈေးရောင်း ခင်တဲကျေးရွာနေသူအား တောင် တွင်း ကြီးမြို့ မရဲ စခ န်းက (ပ)၅၈/ ၂၀၁၃ ပြစ် မှု ပုဒ် မ ၃၇၆/၅၁၁ဖြင့် အမှု ဖွင့် လှစ် ထားပြီး အမှု စစ် ဒုရဲ အုပ် သန်းဇော် မှဆက် လက် စစ် ဆေး နေကြောင်း သိရှိ ရသည်။ အဆို ပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ် သက်၍ တရား လိုဖြစ် သူ ဒေါ်——-မှ ၎င်းင်း၏ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ကို——နှင့် ငယ် လင် ငယ် မ ယားဖြစ်ပြီး အိမ် ထောင် သက်(၁၄)နှစ် ခန့်ရှိပြီဖြစ် ကြောင်း၊၎င်း တွင် သား(၃)ဦး၊သမီး (၂)ဦး၊ပေါင်း သား သမီး(၅) ဦး ရှိ ကြောင်း၊ ၎င်း အနေဖြင့် ယခုဖြစ် စဉ်နှင့် ပတ်သက် ၍ ခင်ပွန်း အပေါ် လုံးဝ ခွင့်မ လွှတ်နိုင်ကြောင်း၊ ၎င်း ၏သား
သမီး(၅)ဦးအားလည်း လူ လားမြောက်သည်အထိ မိခင်ဖြစ် သူမှ ရုန်းကန် ၊ကျွေး မွေး စောင့် ရှောက် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ခင်ပွန်းဖြစ် သူအား လည်း ရွံ ရွာ ကြောက် ရွံ့နေ သဖြင့် ယခု အမှု စစ် ဆေးသည့် အ ခါ တွင် သက်ဆိုင်ရာ တရားသူကြီးအား တင်ပြအကူ အညီတောင်းခံ၍လင်မယားဖြစ် သူမှ တရားဝင် ကွာ ရှင်းပြတ် ဆဲမှု အား သက် ဆိုင်ရာ တရား သူကြီး ထံတွင် တင်ပြ အကူ အညီတောင်း ခံသွား မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ (၂၀.၃. ၂၀၁၃)ရက်တွင် ညီ အစ် ကိုမောင် နှမများ အိမ်၌ ရင် ဖွင့်ပြောပြ ချက် အရ သိ ရှိရ သည်။
စော်ကားတာလား ??? စိန်ခေါ်တာလား ???
Posted by drmyochit Monday, March 25, 2013, under ဆောင်းပါး |2comments
ဗမာ မွတ်စလင် လူငယ် များ ကွန်ယက် ဆိုတာ ဘာသဘောနဲ့ သုံးနှုန်း ထား တာလဲ ???
ရခိုင်ပြည် က ခိုးဝင် လာတဲ့ ဘင်္ဂလီ မွတ်စလင် ကုလားတွေ ရိုဟင်ဂျာ အမည် တပ်ပြီး သမိုင်း လိမ်ဖို့ကြိုး စားနေသ လိုမျိုး ပြည် တွင်းက မွတ်စ လင်ကု လားတွေ ဗမာ မွတ်စလင် နာမည် တပ်ပြီး သမိုင်းတစ်ခု ထပ် လိမ်ဖို့ အစပျိုးေ န တာလား (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကုလား-ဗမာ အဓိက ရုဏ်း ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေ တာလား ???
ဗမာ မွတ်စ လင် ဆိုတာ သမိုင်း တစ်လျှောက် လုံးမ ရှိခဲ့ဘူး .. ဗမာ ထဲမှာ မွတ်စ လင်ဆို တာ မရှိဘူး .. မွတ်စ လင်ဖြစ် သွားရင် ဗမာ မဟုတ်တော့ဘူး .. မွတ်စ လင်ထဲ ၀င်သွားရင် အဲ့ဒီ့ လူကို ဗမာ လို့ မသတ် မှတ်တော့ ဘူး ..
အရှင်း ဆုံးပြော မယ်ကွာ .. ဗမာ မွတ်စ လင်လို့ သုံးနှု န်းတာ လုံးဝ သည်း ညည်း မခံနို င်ဘူး .. ခွေးရူး ကိုက်တာ ထက်နာ တယ်ကွာ ..
ဒီ ကိစ္စကို ဗမာ တိုင်းရင်း သားတွေ အားလုံး လက်ပိုက် ကြည့် မနေကြ ပါနဲ့ .. ဒါဟာ သမိုင်း တစ်ခု ဇောက်ထိုး မိုးမျှော်ဖြစ် သွားအောင် အစပျိုး ဇာတ်လမ်း ဆင်နေ ခြင်းဖြစ် ပါတယ် .. အခု ချိန်မှာ ပြတ်ပြတ် သားသား
မရှင်း ရင် နောင်တ ချိန်မှာ ရခိုင်ပြည် နယ်က ခိုးဝင် လာတဲ့ ဘင်္ဂလီ မွတ်စလင် ကု လားတွေ သမိုင်း လိမ် နေသ လိုမျိုး ကမ္ဘာ့အ လယ်မှာ ခက်ခက် ခဲခဲ ပြန်ဖြေရှင်း ရတဲ့ ပြသ နာကြီးတ ခု ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ် ..
သက် ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူတွေ ဒီကိစ္စကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဖြေရှင်း ပေးပါ .. အခု ချိန်မှာ မရှင်းပေး ရင် ဖြေရှင်း ရခက် ခဲတဲ့ ကုလား- ဗမာ အဓိ ကရုဏ်း လို ပြသနာ မျိုးတွေ ကြုံ လာပါ လိမ့် မယ် ..
အခုတောင် ဗမာ တိုင်း ရင်းသား အများစု ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒီလို အသုံး အနှုန်းကြောင့် ခံပြင်းဒေါသ ထွက်ခြင်း တွေ ဖြစ်နေကြ ပါတယ် ..
ယမ်းပုံ မီးကျ ပေါက် ကွဲ မှုတွေ ထိန်း မနိုင် သိမ်းမရ အခြေ အနေ မျိုးတွေ မကြုံ တွေ့ ခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူတွေ အမြန် ဆုံးဖြေ ရှင်းပေးပါ .. မီဒီ ယာတွေ မသီ တာထွေး အသတ် ခံရတဲ့ အမှုမှာ မွတ်စ လင်တွေ လို့ သုံးနှုန်း ခဲ့လို့ ပြည် တွင်း ထဲက မွတ် စလ င်ကု လားတွေ ဘယ်လို ယမ်းပုံ မီးကျ ဒေါသတွေပေါက် ကွဲပြ ခဲ့ကြ လဲ ..
ဆူးလေ ဘုရားရှေ့က မွတ်စ လင်ကု လားတွေ ဆန္ဒပြ တာကို သတိရ လိုက်ကြပါ .. အခု ငါတို့ ဗမာ တိုင်း ရင်း သားတွေ ကိုစော် ကားခြင်း၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားနာမည်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အလွဲသုံးစားလုပ် ယူသုံးခြင်း ကို လုံးဝလ က် မခံနိုင်ဘူး ..
(အခုလောလောဆယ် ပထမဆုံး တုန့်ပြန်ခြင်း အနေနဲ့ ဒီစာ ထဲမှာ မွတ်စ လင် ကုလားလို့ သုံးနှုန်းရေး သားထားတယ် .. နောက်နောင်လဲ ရိုဟင် ဂျာ ဆိုရင် ရို ဟင် ဂျာမွတ် စလင် ကုလား၊ ဘင်္ဂလီ ဆိုရင် ဘင်္ဂ
လီမွတ် စလင် ကုလား ၊ပြည်တွင်း ကဆိုရင် ပြည်တွင်း ကမွတ် စလင်ကု လား ဟုသာ သုံးနှုန်းသွားပါတော့ မည်)
မိတ္ထီ လာအရေးပေါ် မူ ခြောက်ရပ် ချမှတ် BBC ဖော်ပြချက်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည် သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် တို့ သုံးဦး ဆွေးနွေးပြီး အစိုး ရပေါ် လစီ အနေနဲ့ မိတ္ထီ လာအရေးပေါ် မူ ခြောက်ရပ် ချမှတ် လိုက် တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ဒီကနေ့ မိတ္ထီလာမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှု အတွင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင် မင်းက မူ ခြောက် ရပ်ကို ချပြ ရှင်း လင်း ခဲ့တာ ဖြစ် တယ်လို့ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ကောင်စီ တွဲဖက် အတွင်းေ ရးမှူးချုပ် ဦးဝဏ္ဏရွှေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
၁။ မိတ္ထီ လာဖြစ် စဉ်ပေါ် မှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့၊
၂။ အလား တူ အဖြစ်မျိုး နောက်နောင် မဖြစ်ပေါ်အောင် တားဆီး ကာကွယ်ဖို့၊
၃။ မိတ္ထီ လာအရေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အမိုး အကာအောက် ရောက်ဖို့၊
၄။ အဆင်ပြေ သူတွေ အိမ်ပြန်နိုင် ဖို့ကို ဆောင်ရွက် သွားဖို့၊
၅။ အစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ ပေါင်းစု ညှိနှိုင်းပြီး ဒုက္ခ သည်တွေ ကို ကူ ပံ့ဆောင် ရွက်ဖို့နဲ့
၆။ လူ့အဖွဲ့ အစည်း နှစ်ရပ်ကြား ချစ်ကြည်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေ အပါအ ၀င် နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလ သမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စား လှယ် ဗီဂျေ နမ်ဘီး ယား ကလည်း မိတ္ထီ လာက အပျက် အစီးတွေ ကို အစိုးရ ၀န်ကြီးတွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေနဲ့အ တူ သွားရောက် ကြည့်ရှု ခဲ့ကြပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကို ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက် ဖို့ တောင်း ဆိုခဲ့ ပါတယ်။
လွန် ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကဟု ခန့်မှန်း ရသော ရှေး
ဟောင်း ဘုန်း တော်ကြီး ကျောင်းတော် တစ် ခုကို ဘင်္ဂလာဒေ ခ်ျ့ ရှေးဟောင်း သုတေ သန ဌာန မှ ရှာဖွေ တူး ဖေါ် ရ ရှိ ခဲ့သည်။
ကျောင်း တော်ကြီး ကို ပါလ မင်းဆက် ဒုတိယ ဓမ္မ ပါလ မင်း လက် ထက် အေဒီ (၉၀၀ နှင့် ၁၁၀၀) ကြားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာ သာ ကျောင်းတော် ၃၀ အထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနမှ ပြော သည်။
ကျောင်းတော် ၃၀ အထဲမှ ကျောင်းတော် ၇ ခုမှ ၈ ခုထိ ဘင်္ဂလာ ရှေးဟောင်း သုတေသနမှ ရှာဖွေ တူးဖေါ် တွေ့ ရှိ ထားပြီး ဖြစ် သည်။
ကျောင်းတော် မြေနေရာအား ၂၀၀၉ ခုနှစ်က တွေ့ရှိထားပြီး သုံးနှစ်ကြာ တူးဖေါ်ပြီးနောက် ကျောင်းတော် ကို တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုတွေ့ ရှိခဲ့သော ကျောင်းတော်ကို Raghurampur ကျေးရွာ Rampal မြို့နယ် Munshiganj ခရိုင် တွင် တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ခရိုင် အတွင်း ပထမဆုံး တွေ့ရှိသော ကျောင်းတော် ဖြစ်သည်။
၎င်းပြင် ယခု ကျောင်းတော်သည် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံမှ လွန်ှခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်က ဗုဒ္ဓဘာ သာနှင့် ပတ် သက်သော ကျော်ကြားသော ပညာ ရှင် တစ်ဦး ဖြစ် သူ Atish Dipankar နေထိုင် ခဲ့ရာ နေအိမ် အနီး တွင် တည်ရှိ သည် ဟု ဆို သည်။
မန္တလေး တိုင်း တပ် ကုန်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ အနော် ရထာ ရပ် ကွက်မှာ ပလီ တစ်ခုအ ပါအဝင် အိမ်ငါး လုံး ၂၄ ရက် ညပိုင်းက ဖျက်ဆီး ခံရဟု RFA Facebook မှာ ဖော်ပြ
မန္တလေး တိုင်းဒေ သကြီးနဲ့ ပဲခူး တိုင်းဒေ သကြီး တွေမှာ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်း က နေအိမ် မီးရှို့ဖျက် ဆီးမှု တချို့ဖြစ် ပွားခဲ့ တယ်လို့ RFA က စုံစမ်း သိရ ပါတယ်။
မန္တလေး တိုင်း တပ် ကုန်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ အနော် ရထာ ရပ် ကွက်မှာ ပလီ တစ်ခုအ ပါအဝင် အိမ်ငါး လုံး ဖျက်ဆီး ခံရတဲ့ အတွက် နေပြည်တော်က ရဲတပ် ဖွဲ့တွေ ကိုပါ ခေါ် ယူပြီး အခြေ အနေကို ထိန်းသိမ်းနေ ရတယ်လို့ အဲ ဒီနေရာ ကို ရောက် ရှိနေတဲ့ ရဲ အရာ ရှိတ စ်ဦးက RFA ကို ပြောကြားပါတယ်။
" ဒီနေ့ည သူတို့ လာဖျက်စီးလို့ ပလီ တစ်လုံး အပါ အဝင်အိမ် လေးငါးခြောက်လုံး ပါသွားတယ်။ အခုတော့ သက်ဆိုင် ရာ လူကြီးတွေ ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်း လို့ ငြိမ် သွားပါပြီ၊ ရဲတပ် ရင်းတော့ မဟုတ် ဘူးပေါ့၊ နေပြည်တော် ဘက်က ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ တော်တော် များများ လာကြ ပါတယ်"
မနေ့ ည ကပဲ အမည် မသိ လူအုပ် စုတွေက ရွာသစ်ကြီး ကျေးရွာ အနော် ရထာ ရပ် ကွက်၊ မြဝတီ ရပ်ကွက် နဲ့ ဗိုလ်မင်းရောင် ရပ်ကွက် တွေမှာ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်ပွားအောင် လှုံဆော် သွားခဲ့ တယ်လို့ တပ် ကုန်းမြို့နယ် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် အရာရှိ တစ်ဦး က ပြော ပါတယ်။
" လုံခြုံရေး ရောက် သွားတဲ့ နေရာ ဆို သူ တို့က ထွက်ပြေး တယ်၊ ဟိုဘက် ဝိုင်းလိုက်၊ ဒီဘက် ဝိုင်းလိုက် အဲ့လိုဖြစ်နေ တာ၊ အနော် ရထာရယ်၊ မြဝ တီရယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်ရယ် ဒါလောက်ပဲ"
ပဲခူးတိုင်း အုတ်ဖိုမြို့နယ် အိုးသဲကုန်းကျေးရွာမှာလည်း အမည်မသိ လူအုပ်စုတွေ ဝင်ရောက်လာပြီး ရုန်း ရင်း ဆန်ခ တ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ရှိတဲ့ အတွက် နယ်မြေခံ စစ်တပ် အကူ အညီနဲ့ သွားရောက် ထိန်း သိမ်း နေတယ် လို့ သာယာ ဝတီ ခရိုင်ရဲ တပ်ဖွဲ့အ ရာ ရှိ တ ဦး က RFA ကိုပြော ပါတယ်။
" ကျွန်တော် သိ သလောက် ကတော့ ပြော ရင် သူတို့ ဆီမှာ သွားတာ အရပ် သား တွေက နည်းနည်း စုနေ လို့ ကျွန်တော် တို့ ဆီ ကနေ ရဲ တပ် ဖွဲ့ ဝင်တွေ၊ စစ်တပ် တွေ အင် အား နဲ့ သွားဖြေ ရှင်း လိုက်တော့ ပြီး သွား ပါပြီ ခင်ဗျ၊ ဘာမှ မဖြစ်တော့ ပါဘူး"
မန္တလေး တိုင်းနဲ့ ပဲ ခူး တိုင်း တွေမှာ စနေ့ နေ့ ညက ဖြစ် ပွါးခဲ့ တဲ့ ဆူပူ မငြိမ် မသက် မှု သ တင်းတွေဖြစ် ပါ တယ်။
"တပ်ကုန်းနဲ့ အုတ်ဖိုမှာ အမည် မသိ လူအုပ် စုတွေ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ဝင်ရောက်မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွား" RFA သတင်း ဖော်ပြချက်
မန္တလေး တိုင်းဒေ သကြီး နဲ့ ပဲခူး တိုင်းဒေ သကြီး တွေမှာ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်း က နေအိမ် မီးရှို့ ဖျက်ဆီး မှုတွေ ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
မန္တလေး တိုင်း တပ်ကုန်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ(အနော်ရထာ)ရပ်ကွက် မှာ ပလီတစ်ခုအပါအဝင် အိမ်ငါး လုံး မီးရှို့ ဖျက် ဆီး ခံ ရ တယ်လို့ အဲဒီနေ ရာကို ရောက် ရှိနေ တဲ့ ရဲ အရာ ရှိ တစ်ဦး က RFA ကို အတည်ပြုေုပာကြား ပါတယ်။
မနေ့ ညမှာတော့ တပ် ကုန်းမြို့နယ် အတွင်းကို အမည် မသိ လူ အုပ် စုတွေ ဝင် လာပြီး ရွာသစ်ကြီး ကျေး ရွာ (အနော် ရထာ ရပ်ကွက်)၊ ဓညဝတီ ရပ်ကွက်နဲ့ ဗိုလ် မင်းရောင် ရပ် ကွက် တွေမှာ ဆူပူ မှုတွေ ဖြစ် ပွားအောင် လှုံဆော် သွားတယ်လို့ တပ် ကုန်းမြို့နယ် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့က အရာ ရှိ တစ် ဦးက ပြော ပါတယ်။
ပဲခူး တိုင်း အုတ် ဖိုမြို့နယ် အိုးသဲ ကုန်းကျေး ရွာ မှာ လည်း အမည် မသိ လူအုပ် စုတွေ ဝင်ရောက် လာပြီး ရုန်းရင်း ဆန် ခတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ရှိတဲ့အတွက် နယ်မြေခံ စစ်တပ်အကူအညီနဲ့ သွားရောက် ထိန်းသိမ်းနေ တယ် လို့ သာယာ ဝတီ ခရိုင် ရဲ တပ် ဖွဲ့ က RFA ကိုပြောပါ တယ်။
မိတ္ထီ လာမြို့ မှာ အစ္စ လာမ်နဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဝင်တွေ အကြား ဖြစ် ပွား ခဲ့တဲ့ အဓိ က ရုဏ်းကြောင့် ဒေသ ခံတွေ စိုးရိမ် ကြောက် ရွံ့ နေကြပေ မယ့် နှစ်ဖက် စလုံး မှာ အမုန်း တရားတွေ မတွေ့ ရဘူး လို့ ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှုး ချုပ်ရဲ့ အထူး ကိုယ် စားလှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယား (V J Nambiar) က ပြောကြား လိုက် ပါတယ်။
မိတ္ထီ လာမြို့ ခရိုင် အား က စား ကွင်း၊ အမှတ် (၁) ရဲစခန်း၊ ပညာရေး ကောလိပ် နဲ့ သာ သနဝေ ပုလ္လ ကျောင်း တိုက် တို့မှာ စောင့် ရှောက် ထားတဲ့ ဒုက္ခသည်စ ခန်းတွေ ကို သွားရောက်ကြည့် ရှုခဲ့ပြီး တဲ့နောက် မစ္စ တာ ဗီဂျေး နမ် ဘီ ယားက ပြောကြား ခဲ့တာပါ။
" အိုးအိမ် ဆုံးရှုံး တဲ့ သူတွေ၊ ပစ္စည်း ဆုံးရှုံး တဲ့ နေ ရာတွေ ကို ကျွန်တော် သွားကြည့် ခဲ့ပါတယ်၊ ဒုက္ခ သည်တွေ နဲ့ လည်း စကားပြော ခဲ့ရ ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ထဲမှာ ကြောက်နေ တာတွေ စိုး ရိမ်နေ တာတွေ မြင် ခဲ့ ရပါ တယ်၊ ဒါပေမယ့် အမုန်း တရား ကိုတော့ ကျွန်တော် မတွေ့ ခဲ့ရပါ ဘူး" လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
ဆက် လက်ပြီး မြန် မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခု လို အခြေ အနေတွေ ကို သူ့ အနေ နဲ့စိုး ရိမ်ကြောင်း၊ အထူး သဖြင့် ဒုက္ခ သည် ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာ ဂတ်ကို အကူ အညီပေး ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ အစိုးရ အနေ နဲ့ ထိရောက် တဲ့ နည်းလမ်း တွေကို အသုံးပြုပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြရုပ် ကို မြှင့်တင်ပေး ဖို့လို အပ်ကြောင်း၊ ဘာ သာပေါင်း စုံက လည်း အခြေ အနေတွေ ကို လာရောက် ဖြေ ရှင်းပေး တဲ့ အ တွက် ကျေနပ် အား ရ မိကြောင်း မစ္စတာ ဗီဂျေး နမ် ဘီ ယား က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ခ ရီးစဉ်မှာ လိုက် ပါ သွားတဲ့ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မ င်း က လည်း အဓိ က ရုဏ်းကြောင့် မီးလောင် ခဲ့ရတဲ့ နေအိမ်တွေကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေး မှာဖြစ်ပြီး၊ မြို့ကို မူလ အတိုင်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်း ချမ်း နေ ထိုင်နိုင်အောင် စီ မံဆောင် ရွက်ဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိ န် က လည်း ညွှန်ကြား ထား တယ်လို့ RFA ကို ပြော ပါတယ်။
မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယားရဲ့ မိတ္ထီလာခရီးစဉ်မှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ တပ်မတော် အဆင့်မြင့် အရာ ရှိကြီးတွေ အပြင် ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ၊ ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ၊ မန္တလေး မစိုးရိမ် တိုက် သစ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ လည်း လိုက်ပါခဲ့ကြ ပါတယ်။
သုံး ရက်ကြာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ အဓိ ကရုဏ်း မှာ သေဆုံးသူ (၃၂) ဦးရှိပြီး၊ ဒေသခံ (၉၆၀၀) ကျော် ဒုက္ခ သည်တွေဖြစ် ခဲ့ ရ တယ်လို့ နိုင်ငံပိုင် သတင်း စာတွေ မှာ ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။
မြန်မာ့ အသံနဲ့ ရုပ်မြင် သံကြား ကလည်း မိတ္တီ လာမြို့ အကြမ်း ဖက်မီး ရှို့ မှုဖြစ် စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ တယ် လို့ ယူဆ ရသူ (၁၃ )ယောက်၊ လယ်ဝေးမြို့ ရုံးပင်ကျေး ရွာဖြစ်စ ဉ်မှာ ပါဝင် ပတ်သက် ခဲ့ တယ် လို့ ယူ ဆရ သူ (၅) ယောက် နဲ့ ရမည်း သင်းမြို့နယ် ရွာတန်း ကျေးရွာ ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင် ပတ်သက် ခဲ့တယ် လို့ ယူဆ ရသူ (၁၇) ယောက် တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ဥပဒေနဲ့ အညီဆောင် ရွက်သွား မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိတ္တီလာမြို့မှာ တုတ်ဓါးလက်နက် ကိုင်ဆောင်သွားလာသူ (၅၂) ဦးကို ထိန်းသိမ်း ခဲ့ပြီး ခံ ဝန်နဲ့ ပြန်လွှတ် လိုက်ကြောင်း ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေ ညာ ခဲ့ ပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့ အဓိ ကရုဏ်ဖြေရှင်းရေးဆွေးနွေးမှု မူချ ၆ ချက်ချမှတ်
မိတ္ထီ လာမြို့ မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ အဓိ က ရုဏ်းနဲ့ ပက် သက်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္က ဌ သူရ ဦးရွှေ မန်းနဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး နဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်း ရေး ကော် မတီ ဥက္က ဌ ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် တို့ သုံးဦး မနေ့ ကတွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဆွေးနွေး ပွဲမှာ သဘော တူညီ ချက် ၆ ချက်ရ ရှိခဲ့ တယ်လို့ သိရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လုံး ဆိုင်ရာ အစ္စ လာမ် သာသ နာရေးရာ ကောင်စီ ဌာနချုပ် တွဲဖ က် အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ဦး ၀ဏ္ဏ ရွှေက RFA ကိုပြောပါ တယ်။
" ဦးသိန်း စိန်ရယ်၊ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ရယ်၊ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး သူရဦးရွှေ မန်းရယ် သဘော တူထား တဲ့ ဟာကို တင်ပြ တယ်၊ အဓိက နံပါတ် ၁ အချက်က တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက် သွားမယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ဒီ အဖြစ် မျိုးကို နောက်နောင် မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်သွား မယ်ဆို တဲ့ ကိစ္စ"
ဒါ့အပြင် ဒုက္ခ သည်တွေ အမိုး အကာ အောက် ရောက်ရှိ စေ ဖို့နဲ့ အမြန် ဆုံး သူတို့ အိမ်သူ တို့ ပြန်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေး ဖို့၊ အစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ညှိနှိုင်းပြီး ဒုက္ခသည်တွေ ကို ထောက် ပံ့ဆောင် ရွက် ဖို့နဲ့ လူမှု အဖွဲ့ အစည်းနှ စ်ခု အကြား ယုံကြည် မှု ပြန် လည်ဖြစ်ပေါ် လာအောင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့စသဖြင့် သဘော တူညီ ခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မနေ့ ညနေကလည်း ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေး မှူး ချုပ်ရဲ့ အထူး ကိုယ်စား လှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ် ဘီယား နဲ့ ပြည်ထောင် စု အစိုး ရ အ ဖွဲ့ ဝင်တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေ ဟာ မိတ္ထီ လာမြို့မှာ တံခါးပိတ် အစည်း အဝေး တစ်ရပ် ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး၊ အ လား တူ အဓိ က ရုဏ်း တွေ နောက်နောင် မဖြစ်ပွါးရေး အတွက် အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ပြန် လည် ထူထောင်ရေး ကိစ္စတွေ ဆောင် ရွက်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာ့ ကု လ သ မဂ္ဂ ကလေး များရန်ပုံငွေ အဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ စားနပ် ရိက္ခာ အစီ အစဉ် စတဲ့ နိုင်ငံ တကာ NGO အဖွဲ့တွေ အခု မိတ္ထီ လာမြို့ ကို စတင်ရောက် ရှိနေပြီ လို့လည်း သိရ ပါ တယ်။
News From: RFA ( 24-3-2013)
မိတ္ထီလာ ပြည်သူများမှ တပ်မတော်သားများကို တိုးမြှင့်ချထားရန် တောင်းဆို
ကိုးကွယ် ယုံကြည် သူအ မျိုး မျိုး စုပေါင်း နေ ထိုင် နေကြ တဲ့ မြန် မာနိုင် ငံမှာ ပြည်သူ အားလုံး ချစ် ကြည်ငြိမ်း ချမ်း နေ ထိုင်ကြ ဖို့၊ အစိုးရ အနေ နဲ့ လုံခြုံရေး ကိစ္စ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် ဖို့ ဘာ သာ ပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီ ညွတ်ရေး အ ဖွဲ့က ဒီကနေ့ သေ ဘာ ထား ကြေညာ ချက် တစ်ရပ် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါ တယ်။
နှစ် ဦးနှစ်ဖက် ချစ် ချစ် ခင်ခင် ပြန်လည် နေထိုင် ကြဖို့ အတွက် ကြေညာ ချက် ထုတ်ပြန် ရ တာ ဖြစ်ကြောင်း ဘာ သာ ပေါင်း စုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ အတွင်းရေး မှူး ဒေါက် တာ သာ ဥာဏ်က RFA ကို ပြော ပါတယ်။
" ယခုဖြစ် တာ သာ မာန် အရောင်း အဝယ် အငြင်း ပွား မှု ပဲလေ အဲ့ ဒါ ဘာ သာရေး အထိနွယ် သွား စရာ အကြောင်း မ ရှိဘူး၊ အဲ့လို မဖြစ်အောင် အ တူသော ဘာသာ ဝင်တွေ က ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်း ချမ်း ဖြေရှင်း ဖို့ပဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ် နေ ရ တာ လဲ၊ ဘာကြောင့် တစ် ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆင် မပြေချင်နေရ တာလဲ အဲ့ဒီ အဓိ အကြောင်း အ ရင်း ကို ရှာဖို့ ကြိုး စား ပါမယ်"
ဘာသာ ပေါင်းစုံက ခေါင်းဆောင် တွေပါ ဝင်တဲ့ အဲဒီ ထုတ်ပြန် ကြေ ညာ ချက်မှာ အစိုး ရဘက် က နှစ်ဖက်ပြည် သူ တွေ ရဲ့ လုံခြုံရေး ကို ထားရှိဖို့၊ ဒီကိစ္စတွေရပ်တွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ စစ်ဆေး အရေး ယူဆောင် ရွက်ပေး ဖို့၊ ပြည် သူလူ ထု အနေ နဲ့ မေ တ္တာကို အခြေ ခံပြီး ငြိမ်းချမ်း စွာနေ ထိုင်ဖို့၊ မလိုလား အပ်တဲ့ ပဋိပ က္ခတွေ မှာ မပါဝင်ကြ ဖို့နဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ် တွေမှာ လည်း မပါဝင် ကြဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ ထား ပါတယ်။
ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် သွေးထိုး လှုံ့ဆော် နေသူများကို အမြန...
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ဆိုင် အားလုံးကို ည ကု...
ကာလာဘတ်(စ)တီးစွန္နီ ဂျာမေဗလီ ရှေ့တွင် ခရီးသွားပြည်သ...
ပဲခူးတိုင်း အိုးသည်ကုန်းမြို့မှာ ဆူပူ တိုက်ခိုက် မ...
ကိုရီးယားသွားခွင့် စာမေးပွဲ ကွန်ပြူတာဖြင့်သာ ဖြေဆိ...
နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်က တည်ရှိခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြ...
မန္တလေး တိုင်း တပ် ကုန်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ ...
"တပ်ကုန်းနဲ့ အုတ်ဖိုမှာ အမည် မသိ လူအုပ် စုတွေ ၂၄ ရ...
မိတ္ထီလာမြို့ ဒုက္ခသည်တွေမှာ အမုန်းတရားတွေမတွေ့ရကြော...
မိတ္ထီလာမြို့ အဓိ ကရုဏ်ဖြေရှင်းရေးဆွေးနွေးမှု မူချ ၆...
မိတ္ထီလာ ပြည်သူများမှ တပ်မတော်သားများကို တိုးမြှင့်...